Raspberry Pi 400: komputa yedesktop inoenderana nekhibhodi | Linux Vakapindwa muropa
Raspberry Pi 400: desktop inoenderana nekhibhodi
Ndinofanira kubvuma kuti, ndichiona ichi chigadzirwa nemutengo wacho, ndakashamisika kwazvo. Iyo Raspberry Pi bhodhi inogona kushandiswa kune akawanda emagetsi mapurojekiti, kusanganisira mamwe emarobhoti. Bhodhi rinogona kutengwa zvakasiyana kana pamwe chete nekiti iyo inosanganisira tambo (simba neHDMI), kadhi kana bhokisi, asi chikumbiro chitsva chekambani chinoenda kumberi: iyo Raspberry Pi 400 iyo komputa yedesktop, chero bedzi isu tichifunga nezve ayo mashoma.
Uye iyo kambani inoziva kuti vazhinji vedu tinotenga rimwe remabhodhi ayo kuti tishandise sekombuta shoma, uye kune akawanda uye akawanda masisitimu anoshanda anowanikwa kwariri. Mukuru ndiye Raspberry Pi OS, asi kune vamwewo vakawanda (se estos) ichangobatanidzwa naUbuntu 20.10 Groovy Gorilla uye ichakurumidza kuve Fedora 34 mu KDE vhezheni. Izvo zvinopfuura zvingangoita kuti izvi ndizvo zvakagadzira iyo rasipiberi kambani yakasarudza kuvhura iyi komputa, iri chaizvo yakagadzirwazve uye kuendesa Raspberry Pi 4 mukati mekhibhodi.
Raspberry Pi 400: iyo 4GB bhodhi uye keyboard kune € 75
Uye kana ndataura kuti kuvhurwa uku kwakandishamisa, kwave kuri nekuda kwemutengo wayo, kunyangwe yakamira kundishamisa pandakatanga kuongorora mutengo wayo. Kutarisa mukati chimwe chezvitoro zvinopa iyo muSpain, isu tinofanirwa kuve ne mutengo we € 74.95, saka zviripo here? Zvakanaka, ndinofunga izvi zvinopokana uye zvinoenderana nezvatiri kutsvaga: kana tichida kushandisa Raspberry Pi sekombuta, ini ndinofunga zvakakodzera izvi nekuda kwezvikonzero zviviri: iyo keyboard yakatoverengerwa, uye zvakare vanoona kuti dhizaini inobvumidza mweya kutenderera zvirinani mukati, saka hatidi kutenga bhokisi uye kunama heatsinks kudzivirira matambudziko ekupisa.
Iyo Raspberry Pi 400 inowanikwawo sechikamu kit, asi kwete munyika dzakaita seSpain. Iyo kit yakatarwa pamitengo inopfuura pamusoro pe € 100 uye inosanganisira:
Raspberry Pi USB-C magetsi.
Raspberry Pi mbeva.
1M HDMI Cable.
16GB kadhi-SD kadhi.
Raspberry Pi mutungamiriri wekutanga muSpanish.
Mune imwezve € 25, tichave tichitenga imwe 16GB microSD kadhi, yepamutemo magetsi, iyo inodhura, mbeva uye tambo yeHDMI, uye ese ari mumavara epamutemo. Ini handisi kuzotenga, nekuti ini ndatova nezvose zvandinoda, asi ndinofunga ndingadai ndakatenga kit iyi dai yanga iri kunze kwegore rapfuura. Zvakadii neRaspberry Pi 400?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspberry Pi 400: desktop inoenderana nekhibhodi
Ini ndinofunga icho chigadzirwa chavakaburitsa yeKisimusi uye ichatengesa zvakanaka.
Zvisinei hazvo handina chokwadi. Zvinotaridza kwandiri kuti pfungwa yekhibhodi ine tambo nhatu dzakavharirwa mukati (simba, tarisa uye mbeva) uye kusungirirwa kuchiongorori idanho rekudzokera kune avo vedu avo vakajairira kusavapo kwetambo. Risipiberi rinoshandiswa sekombuta yedesktop rinonyanya kuvanzika kuseri kwechigadziro uye rinoshandiswa neisina waya keyboard + mbeva.
Kune mamwe ese, zvinoita kwandiri senge chigadzirwa chakanyatsogadzirwa uye chakanyatso gadziridzwa mumutengo.
Red Hat Enterprise Linux 8.3 Inosvika neKuvandudzwa, Kernel Enhancements, uye Zvimwe
Chechitatu-bato repositori. Maitiro ekuwedzera uye kuvabvisa